Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 19) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-04 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 19)
Anio aho dia te hiresaka aminao momba ny fonao. Ny foko? Tamin'ny fotoana farany nandehanako tamin'ny fitsirihana ara-pahasalamana fisorohana dia nahavoa ahy izany. Afaka mihazakazaka aho, milalao tenisy ... Tsia, tsy momba ny taova ao amin’ny tratranao no mampipoitra ra, fa momba ny fo, izay miseho in-90 mahery ao amin’ny Bokin’ny Ohabolana. Eny ary, raha te hiresaka momba ny fo ianao dia ataovy fa tsy dia zava-dehibe loatra izany - tsy maintsy misy zava-dehibe kokoa amin'ny fiainana kristiana azo resahina. Maninona raha milaza amiko ny fitahian'Andriamanitra, ny lalàny, ny fankatoavana, ny faminaniana ary ... andraso ary hojerena! Toy ny maha-zava-dehibe ny fonao ara-batana, dia toy izany koa ny fonao anaty. Raha ny marina, tena zava-dehibe ny didin’Andriamanitra mba hiaro azy io. Izay no laharam-pahamehana. Tandremo ny fonao indrindra (Ohab 4,23; Fiainam-baovao). Noho izany, tokony hokarakaraintsika tsara izany. Ah, hitako izao izay tadiavinao holazaina amiko. Tsy tokony ho very fifehezana ny fihetseham-poko sy ny fihetseham-poko aho. Fantatro. Miezaka foana ny fifehezan-tena aho ary tsara, mibedy aho indraindray - indrindra amin'ny fifamoivoizana - fa raha tsy izany dia heveriko fa voafehy aho, indrisy fa mbola tsy azonao aho. Rehefa nanoratra momba ny fontsika i Solomona, dia niresaka momba ny zava-dehibe lavitra noho ny teny ratsy na ny fitenenan-dratsy. Niahy ny fitaoman’ny fontsika Izy. Resahin’ny Baiboly ho loharanon’ny fankahalana sy fahatezerana ny fontsika. Mazava ho azy fa mihatra amiko koa izany. Raha ny marina, betsaka kokoa no avy ao am-pontsika: ny faniriantsika, ny antony manosika antsika, ny fikasantsika, ny safidintsika, ny nofinofisintsika, ny faniriantsika, ny fanantenantsika, ny tahotsika, ny fitsiriritana, ny fahaiza-mamorona, ny faniriantsika, ny fitsiriritana - tena ny zavatra rehetra azontsika atao. dia , manana ny fiaviany ao am-pontsika. Tahaka ny fontsika ara-nofo no ivon’ny vatantsika, dia toy izany koa ny fontsika ara-panahy ho ivon’ny tenantsika manontolo. Tena nibanjina ny fo i Jesosy Kristy. Hoy izy: Satria ny fonao foana no mamaritra izay lazainao. Ny olona tsara fanahy manao teny tsara avy amin'ny fo tsara, ary ny ratsy fanahy manao teny ratsy avy amin'ny fo ratsy2,34-35; Fiainam-baovao). Eny ary, ilazanao amiko fa toy ny loharanon-drenirano ny foko. Malalaka sy lava ary lalina ny ony, fa loharano eny an-tendrombohitra, sa tsy izany?
Marina! Ny fontsika ara-dalàna dia misy fiantraikany mivantana amin'ny faritra tsirairay amin'ny vatantsika, satria manompa ra amin'ny lalan-drà sy amin'ny lalan-drà kilometatra maro izy io ary mitazona ny asa tena ilaina. Ny fo ao anaty kosa no mitarika ny fiainantsika. Eritrereto ny zavatra inoanao rehetra, ny finoanao lalina indrindra (Rom 10,9-10), ny zavatra nanova ny fiainanao - izany rehetra izany dia avy any amin'ny toerana lalina ao am-ponao (Ohabolana 20,5). Ao am-ponao dia manontany tena ianao hoe: Nahoana aho no velona? Inona no dikan'ny fiainako? Nahoana aho no mifoha maraina? Nahoana aho no iza ary iza aho? Nahoana aho no tsy mitovy amin'ny alikako, azonao ve izay lazaiko? Ny fonao no manao anao hoe iza ianao. Ny fonao dia ianao. Ny fonao no manapa-kevitra ho an'ny tena lalina sy marina anao. Eny, afaka manafina ny fonao ianao ary manao saron-tava satria tsy tianao ho hitan'ny hafa ny tena eritreritrao, saingy tsy manova ny maha-izy antsika ao anatin'ny tenantsika izany. be dia be? Andriamanitra dia milaza aminao sy izaho ary isika rehetra fa andraikitry ny tsirairay ny mikarakara ny fony. Fa nahoana no ao am-poko?Ny tapany faharoa amin’ny Ohabolana 4,23 manome ny valiny: satria ny fonao no mitaona ny fiainanao manontolo (Fiainana Vaovao). Na araka ny voalaza ao amin’ny Baiboly Hafatra: Tandremo ny hevitrao, fa ny hevitrao no mamaritra ny fiainanao (nadika malalaka). Ka eo no manomboka izany? Tahaka ny voan'ny hazo iray ahitana ny hazo iray manontolo ary mety ho ala, dia toy izany koa ve ny fiainako manontolo ao am-poko? Eny. Ny fiainantsika manontolo dia mivoaka avy ao am-pontsika; na ho ela na ho haingana dia hiseho amin'ny fitondran-tenantsika ny maha-izy antsika ao am-pontsika. Ny fitondran-tenantsika dia manana fiaviana tsy hita maso - matetika ela be talohan'ny farany. Ny hetsika ataontsika dia tena fanambarana tara momba ny toerana nisy anay hatry ny ela. Efa niteny ve ianao hoe: Tsy fantatro hoe ahoana no nahatonga izany tamiko. Ary mbola nanao izany ianao. Ny marina dia efa ela no nieritreritra an'io, ary rehefa tonga tampoka ny fahafahana dia nanao izany ianao. Ny eritreritra anio dia ny hetsika rahampitso sy ny vokany. Ny fialonana anio dia lasa tabataba rahampitso. Ny zotom-po tery ankehitriny dia lasa heloka bevava fankahalana rahampitso. Ny fahatezerana anio dia fanararaotana rahampitso. Ny faniriana anio dia fijangajangana rahampitso. Ny fitiavam-bola ankehitriny dia fanodinkodinam-bola rahampitso. Ny meloka anio dia ny tahotra rahampitso.
1fanambarana 4,23 dia mampianatra antsika fa ny fitondran-tenantsika dia avy ao anaty, avy amin’ny loharano miafina, ny fontsika. Izany no hery mitarika ao ambadiky ny fihetsika sy ny teny rehetra; Araka ny fisainany ao am-pony no toetrany (Ohabolana 23,7, nadika maimaim-poana avy ao amin’ny Baiboly Amplified) Ny zavatra avy ao am-pontsika dia aseho amin’ny fifandraisantsika amin’ny zava-drehetra mahakasika ny tontolo iainantsika. Mampahatsiahy ahy ny iceberg. Eny, marina, satria ny fitondran-tenantsika dia tendron'ny iceberg fotsiny. Raha ny marina dia mipoitra ao amin'ny faritra tsy hita maso amin'ny tenantsika izany. Ary ny ampahany lehibe amin'ny iceberg any ambanin'ny rano dia ahitana ny fitambaran'ny taonantsika rehetra - na dia hatramin'ny nahatorontoronina antsika aza. Zavatra iray lehibe tsy mbola nolazaiko . Jesosy velona ao am-pontsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina (Efes 3,17). Andriamanitra dia miasa tsy tapaka ao am-pontsika mba hahatonga antsika haka ny endrik’i Jesosy Kristy. Saingy nandritra ny taona maro dia nanimba ny fontsika tamin'ny fomba isan-karazany isika ary isan'andro dia tototry ny eritreritra. Mila fotoana be àry izany. Miadana ny fitafy ny endrik’i Jesosy.
Ka avelako ho an Andriamanitra io ary hikarakara ny zava-drehetra izy? Tsy izany no fomba fiasa aminy. Andriamanitra mavitrika eo anilanao ka mangataka anao hanao ny anjaranao, ary ahoana no fomba hanaovana izany? Inona ny ahy? Ahoana no fomba hikarakarako ny foko? Tany am-piandohana dia ilaina ny fehezinao. Ohatra, raha hitanao fa mitondra tena amin'ny tsy finoana kristiana ny olona iray, dia tokony hosoratanao ny bokotra fiatoana ary handinika hoe iza ianao ao amin'i Jesosy Kristy ary mitaky ny fahasoavany.
2Amin'ny maha-ray sy raibe ahy, dia nianatra aho - ary miasa tsara amin'ny ankamaroan'ny fotoana - ny mampitony ny zazakely mitomany amin'ny fitarihana ny sainy amin'ny zavatra hafa. Saika miasa avy hatrany izy io. (Toy ny manindrona lobaka izany. Ny fonao no mamaritra hoe inona no bokotra miditra amin'izay lavaka voalohany. Ny fitondran-tenantsika dia mitohy hatramin'ny farany. Raha diso ny bokotra voalohany dia diso daholo!) Heveriko fa tsara ny fanazavana ! Sarotra anefa izany. Isaky ny miezaka sy mihidy nifiko aho mba hitovy amin’i Jesosy; Tsy tafita aho. Tsy momba ny fitsapana sy ny asa mafy. Mikasika ny tena fiainan’i Jesosy Kristy izay naseho tamin’ny alalantsika izany. Ny Fanahy Masina dia vonona hanampy antsika hifehy sy hanaisotra ny eritreritsika ratsy rehefa miezaka ny hiditra ao am-pontsika izany. Raha misy eritreritra diso tonga dia hidio ny varavarana mba tsy hidirany. Tsy afa-manoatra noho ny famindram-pon'ireo eritreritra izay mitsinkafona ao an-dohanao ianao. Amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana ireo no andresenantsika ny hevitra mifanohitra ary ampianarintsika hankatò an'i Kristy (2. Korintiana 10,5 NL).
Aza avela tsy hisy mpiambina ny varavarana. Manana ny zavatra rehetra ilainao ianao mba hanananao fiainana araka an'Andriamanitra - manana fitaovana ahafahanao misambotra ny eritreritra tsy ao am-ponao ianao (2. Petrus 1,3-4). Te-hampahery anareo koa aho, ry Efesianina 3,16 mba hahatonga izany ho vavaky ny fiainanao manokana. Ao aminy no angatahin’i Paoly mba hanomezan’Andriamanitra anao amin’ny haben’ny habeny ny hery hatanjaka ao anaty amin’ny alalan’ny fanahiny. Mitombo miaraka amin'ny fanomezan-toky tsy tapaka sy ny fahatanterahan'ny fitiavan-drainao sy ny fiahiany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao. Tandremo ny fonao. Arovy izany. Arovy izany. Mitandrema amin'ny eritreritrao. Lazainao ve fa andraikitro izany? Manana azy ireo ianao ary afaka mandray azy ireo koa.
2Ny fahasoavana dia tsy momba ny fankasitrahana tsy mendrika akory; fanomezan'Andriamanitra ho an'ny fiainana andavanandro izany (2. Korintiana 12,9).